တာချီလိတ်မြို့၌ လူသတ်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွား
▼ 09/08 - 09/15 (53)
Golden Ear v2.8.3 for iPhone, iPad , iPod 6MB
Weather Live v2.2 for iPhone, iPad , iPod 40MB
Steampunk Skull Live Wallpaper v1.2.1 Apk 8MB
Next Launcher 3D. v2.02.build 95 Apk 12MB
အွန်လိုင်းက ဥပဒေ ဒီပလိုမာတွေ ယူလို့ရနေပြီ
အဆစ်နာ ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင် ရောဂါရှင်များအတွက်
အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး အသုံးပြုလွန်း သူများ ပိုမိုခေါ...
ကလေးငယ်ထံမှ ရွှေဆွဲကြိုးဖြတ်ယူသွားသည့် တရားခံများအာ...
မော်လိုက်တွင် မူးယစ်ဆေးဖြတ်လိုသူများကို ရဲနှင့်ဆေး...
မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတိုက် ပွဲတွင်ဦးတေဇအ...
ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ နေ့ဖြစ်လေမလား ( မြန်မာ U-23 & မလေ...
တပ်မတော် အရာရှိ အသတ်ခံရမှု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်...
ခိုးမှုမသင်္ကာဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာမှ လူသတ်မှုပေါ်
MPT က ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့်အပြိုင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခများ...
လုပ်သက်ရင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများကို မြေကွက်ပေးရန် ရန...
GSM လိုင်းကတ်အရေအတွက် တိုးရောင်းမည်
လူအများစုဝယ်နိုင်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသည့် ကျန်းမာရေးအ...
McTube Pro v3.0 For iPhone, iPod , iPad 4MB
Magic Hour - Camera v1.2.61 Apk 14MB
ezPDF Reader v2.3.1.0 Apk 12MB
Internet Download Manager 6.17 Build9| 5.8 MB
Facebook APK 3.7 Build 353711 (latest version) 16MB
Bang Bang Racing HD v1.10 Apk Game 48MB
Subway Surfers v1.14.1 Unlimited Coins Apk 27MB
Real Football 2014 2d.v1.0.5 Java Version Apk 6MB
Plants vs. Zombies2HD v1.0.1 Mod For Android 115MB
မြ၀တီ ဥရောပဇုန်မှအီတလီနှင့် နယ်သာလန် 2014 ကမ္ဘာ့ဖလာ...
Camera360 v4.7.1 Apk
Ornagai v2.1.6 Apk 5MB
Lightning Browser + v2.5.1 Apk
Jetpack Joyride v1.5.1.[Mod Money] Apk Game 43MB
Automatic Cache Cleaner v1.0.8 Apk 181Kb
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ကမ္ပည်းတပ်ဆင်ခြင်း ယခုလကုန...
အလုပ်မှ ပြန်လာသူကို ရဲကင်းမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေး ရိုက်နှက်...
"ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ အတွက် သီချင်းရွေးချယ်မှု အကြောင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီးစဉ် စတင်
Ooredoo က ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော် Sky Net တံခွန်စိုက် အ...
ရုံးခွန် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် နှုန်းထား လျှော့ချရေး သဘောတူ
မန္တလေး အိုးဘိုရွှေကျင် ကျူးကျော်တဲ၌ ငါးထောင်တန်နှင့...
အဝေးပြေးကားဂိတ်သွားမည့် ခရီးသွားများကို တက္ကစီဌားခ၏...
စမူဆာဗြောက်အိုးကြောင့် ၁၀ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
အရေးပေါ် ဖုန်းအား အမြန်သွင်းနည်း
ခွေးကိုဆဲသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား ပုလောမြို့နယ် ပလ ကေ...
လူပေါင်း ၄၂၉ ဦး၊ ကလေး ၄၂၆ ဦးသေတဲ့ ဆီးရီးယား သြဂု...
အောက်ပါတို့ ကို မှန်အောင်ဖြေလျှင် ပညာတော်သင်စေလွှတ်...
အမျိုးသမီးငယ်၏ ဓါတ်ပုံများကို photoshop ဖြင့်ပြုပြ...
Beranda » သတင်းများစုစည်းမှု » တာချီလိတ်မြို့၌ လူသတ်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွား
Ditulis oleh: Unknown - Saturday, September 14, 2013
စက်တင်္ဘာ ၁၃ ရက် နေ့ ညနေပိုင်းက တာချီလိတ်မြို့ မိုးသောက်ကြယ် စားတော်ဆက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် (ဦး) လုံးစိုင်းစိုင်း မိုးသောက်ကြယ်အား သေနတ်သမားတဦးက ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
“တာချီလိတ်မြို့ ဆန်ဆိုင်း (က) ရပ်ကွက်မှာ ရှိတဲ့ သူ့အိမ်မှာဘဲ ပစ်သတ်ခံရတယ်။ လည်ပင်းမှာ နှစ်ချက် ထိတယ်။ ပေါင်မှာ တချက်ထိတယ်။ ပွဲချင်းပြီးသေတယ်။ ချင်းရိုင်းဆေးရုံအထိ ယူသွားပြသေးတယ်။ ဒီနေ့ တာချီလိတ်ကို အလောင်း ပြန်သယ်မယ်ပြောတယ်” - ဟု တာချီလိတ်မြို့နေ လုံးစိုင်းနွန်းက ပြောသည်။
လုံးစိုင်းစိုင်း မိုးသောက်ကြယ်သည် ယခင်က ဦးလောဝ်းဆန်း ဆိုသူနှင့် ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပြီး တာချီလိတ် အခြေစိုက် ဗျူဟာမှူးအဆင့်အထိ တက်ရောက်ဖြေရှင်းရကြောင်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့မှ (ဦးလောဝ်းဆန်း၏လူ) စိုင်းယီသည် တာချီလိတ်မြို့သွားသည်ဟုဆိုကာ ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် လုံးစိုင်းစိုင်း မိုးသောက်ကြယ် အမှုနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည်ဟုလည်း ၎င်းတို့ကိစ္စအား သိနေသူများက ပြောဆိုသုံးသပ်ပါသည်။ သို့သော် လက်သည်အမှန်ကို ဖွင့်ဟနိုင်ရန် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေသေးသည်ဟုလည်း တာချီလိတ်မြို့မှ ရဲ တဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ဟိုးတလောက ပစ်သတ်ခံရတဲ့ စိုင်းကျောက် အမှုနဲ့ ဆင်တူတယ်၊ တရား ခံလည်း တယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်” - ဟု အဆိုပါ ရဲတပ်သားက ပြောဆိုပါသည်။
ပစ်သတ်ခံရသူ အသက် ၅၃ နှစ်ရှိ လုံးစိုင်းစိုင်း မိုးသောက်ကြယ်ကို တာချီလိတ်မြို့ခံများက လုံးစိုင်းမာ ဟု သိကြကြောင်း၊ သုံးဆယ့်ခြောက်ကောင် ထီ ကန်ထရိုက် ခေတ်က ခွေး(မာ) အား ပေါက်ကောင်အဖြစ်မကြာ ခဏ ထည့်သောကြောင့် လုံးစိုင်းမာ ဟု အမည်တွင်ကြောင်း၊ လုံးစိုင်းစိုင်း မိုးသောက်ကြယ်သည် ကျိုင်းတုံမြို့ ကျိုင်းခမ်းလုံ ဇာတိ တိုင်းနေသျှမ်းအမျိုးသားဖြစ်ကြောင်း၊ သုံးလုံးချဲထီအားကန်ထရိုက်ရသူတဦးဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
0 comments "တာချီလိတ်မြို့၌ လူသတ်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွား", Baca atau Masukkan Komentar
Bounty Killer 2013 AVI 700MB
ခပ်ကြမ်းကြမ်းမှ ကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Bounty Killer 2013 လာပီဗျာ http://www.youtube.com/watch?v=isE9TBaHkJQ မှာ ကြည့်ပြီးြ...
နာဂစ်နဲ့ကျွန်တော် အပိုင်း(၁) ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်
မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ ကြာပြီ။ 4-2-2014 8:53 pm နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်တမ်းကျန်အောင်ရေးပါ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပ မူဆလင်နိုင်ငံများတွင် ရေးသားမှူများ နှင့်၊ ...
Keys 24 September 2013 + Kaspersky 2014 Activation Code For3Months
Kaspersky Keys 24 September 2013 Kaspersky လိုင်စင် အဆင်မပြေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အသစ်ထွက်လာတဲ့ လိုင်စင်ကီးလေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါ...
1Weather Pro Local Forecast Radar v2.3.3.PRO Features Apk 8MB
1Weather အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 17ရက်နေ့ထွက်အပ်ဒိတ်ဖြစ်ပါတယ် ရာသီဥတုကြည့်တဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ သူကလွယ်တယ် ကြည့်ရတာ ကိုယ်နေတဲ့ြ...